पत्निले झगडा गर्ने ? « News of Nepal
पत्निले झगडा गर्ने ?
अब संसद छोडिन्न
प्रधानमन्त्री छनौटका लागि कार्यतालिका अनुसार आज संसदमा निर्वाचन हुनेछ। विपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको अवस्थामा यो क्रम फेरि रोकिने संभावना पनि छ। एमालेको संसद अवरुद्ध गराईले धेरैलाई चित्त नबुझेको पनि पाइएको छ। उनीहरूको तर्क छ – पहिला कानुन बनाउने अनि त्यो कानुन अनुसार निर्णयहुँदा गनगन गर्ने ? यसरी संसद अवरुद्ध गर्न थालियो भने पछि कुनै पार्टी वा सांसदले राजा चाहियो वा घरमा श्रीमतिसँग झगडा पर्यो भन्दै संसद अवरुद्ध गर्न खोज्यो भने त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने ?विपक्षी भनेको छायाँ सरकार भनिन्छ केही न केही सोचेकै होला नि ?कि कसो पाठकबृन्द ?
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बारे दुई जनाबीच संवाद चलिरहेको धरहराले सुन्न पाएको छ। एक भन्दै थिए– चुनावमा हारिने हो कि डर लागिरहेको छ। दोस्रोको भनाई थियो – हैट, के चिन्ता लिएको ? गणना सकिने बेलामा मतपत्र च्यातेर फालिदिने जित्ने निश्चित भइहाल्छ नि ? के यस्तै नजिर बन्न लागेको हो त अब ?
५० लाखको टाउको
विशेष परिस्थितिले आज रोकिएला जस्तो छ नत्र प्रधानमन्त्री फेरिनेछन्। अहिले देउवाले भनेको संवाद रे भनेर धरहरा वरपर धेरैले चर्चा गरेको सुनिएको छ। देउवाले प्रचण्डलाई भनेको भन्दै प्रचारित एउटा जोक रहेछ – –तिम्रो त्यस्तो फुच्चे टाउकाको मोल मैले नै ५० लाख तोकिदिएको हुँ। त्यत्रो गुन लगाउने मलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग त गर्नै पर्यो नि।